Dempsey Oo Ka Haray Safarka Kooxdiisa Fulham Ee Switzerland Isagoo Lala Xiriirinayo Liverpool - jornalizem
Dempsey Oo Ka Haray Safarka Kooxdiisa Fulham Ee Switzerland Isagoo Lala Xiriirinayo Liverpool
Clint Dempsey ayaa ka haray safarka ay kooxdiisu tababarka ugu aaday dalka Switzerland isagoo la sheegay in uu doonayo in uu u wareego kooxda Liverpool.
Dempsey ayaan raacin dayuuradii kooxda ka qaaday magaalada London subaxnimadii Isniinta si ay muddo toddobaad ah tababar ugu soo qaataan dalka Switzerland,waxayna taasi sababtay in laga yaabo in uu laacibkan u wareegida kooxda Liverpool tahay mid laga shaqeynayo.
Sida ay qortay Goal.com ma cada sababta uu Dempsey u qaatay go’aankan inuu yahay mid isaga u gaar ah ama mid ka timid tababaraha Fulham Martin Jol.
Fulham ayaa marka ay muddo toddobaad ah ku qaadato dalka Switzerland waxa ay u safri doontaa dalka Faransiiska si ay kulan saaxibtinimo ula soo ciyaarto kooxda Nice Sabtida, kadibna waxay dib ugu soo laaban doontaa UK.
29-jirkan u dhashay dalka Maraykanka ayaa hore ugu cadeeyey tababare Jol iyo madaxda sare ee kooxda Fulham inuu doonayo in uu isaga tago kooxda uuna ku biiro naadiga Liverpool, waxana uu tababaraha Liverpool Brendan Rodgers hore u qirey in uu doonayo in uu ciyaaryahankan kooxda keeno.
Waxana la sheegay inuu ciyaaryahankan qadka dhexe ka weerartama oo dhaliyey 17 gool oo horyaalka Premier league ah iyo guud ahaan 23 gool oo tartanada oo dhan ah xilli ciyaareedkii la soo dhaafay diidey in uu u saxiixo kooxdiisa heshiis saddex sano ah oo uu afar sano ka dhigan karo haddii uu doorto.
Dempsey oo u soo guuray dhinaca galbeed ee magaalada London muddo laga joogo shan sano iyo bar ayaa rumeysan in xiisaha ay u hayso Liverpool ay tahay fursadii ugu dambeyey ee uu ugu ciyaari karo naadi weyn.
Si kasta ha ahaatee ciyaaryahankan ayaa la qaatay tababarka dhalinta yar yar ee kooxda Fulham isagoo muujinaya sida ay ugu go’an tahay inuu dhowro heshiiska uu kooxda kula jiro.